कतै तपाईलाई फोक्सो क्यान्सर भएको त हैन ? देखिन सक्छ यस्ता लक्षण - कतै तपाईलाई फोक्सो क्यान्सर भएको त हैन ? देखिन सक्छ यस्ता लक्षण -
कतै तपाईलाई फोक्सो क्यान्सर भएको त हैन ? देखिन सक्छ यस्ता लक्षण
काठमाडौँ । पछिल्ला १ बर्षमा तपाईले पनि महसुस गरिसक्नु भएको छ कि कसैले तपाईको वरपर खोकी गर्ने बित्तिकै वा यदि तपाई आफैंले खोक्नुहुन्छ, तपाईको मनमा पहिलो प्रश्न आउँछ कि त्यो कोभिड हो ? यदि तपाई खोकी ज्वरो, गन्ध र स्वादको कमी जस्ता लक्षणहरू अनुभव गर्दै हुनुहुन्छ भने तुरून्त कोरोना जाँच गर्नुहोस्।
तर यदि तपाईंको कोरोना जाँच नकारात्मक छ र अझै पनि तपाईंको खोकीले उपचार गरिरहेको छैन, ढिलाइ गर्नुको सट्टा तुरुन्त डाक्टरलाई सम्पर्क गर्नुहोस्। हामी मध्ये ५० प्रतिशत त्यस्ता व्यक्तिहरू हुन् जसले सचेत छैनन् कि यदि तपाईंको खोकी ३ हप्ता भन्दा बढि जारी रह्यो भने, यो फोक्सोको क्यान्सरको लक्षण हुन सक्छ।
डाक्टरहरूका अनुसार यदि व्यक्ति फोक्सो क्यान्सर भएमा सुरुको अवस्थामा यस्तो कुनै लक्षण देखा पर्दैन । बिरामीहरू सचेत बन्न थाल्छन जब तिनीहरूको रोग उच्च चरणमा पुग्दछ । धेरै मानिसहरू यो सोच्दछन् कि धूम्रपान गर्नेहरूलाई मात्र फोक्सो क्यान्सर हुन्छ ।
तर यस्तो अवस्था छैन कि गैर धूम्रपान गर्नेलाई पनि फोक्सोको क्यान्सर भइरहेको छ। त्यसोभए तपाइँको खोकीलाई साधारण संक्रमण वा चिसोको रूपमा बेवास्ता गर्नुको सट्टा डाक्टरलाई एकचोटि सम्पर्क गर्नुहोस् र आवश्यक परीक्षण गर्नुहोस्।
खोकीको तरीकामा परिवर्तन
यदि तपाईंले ३ हप्ता भन्दा बढी समयदेखि खोकी रहनु भएको छ र खोक्दा ठूलो आवाज आउँछ भने तपाईलाई खोकीमा रगत पनि देखा पर्न सक्छ । यी लक्षणहरूलाई वेवास्ता नगरनुहोस् । तुरुन्त डाक्टरलाई सम्पर्क गर्नुहोस्। यो फोक्सो क्यान्सरको संकेत हुन सक्छ।
खोकीको साथ सास फेर्न गाह्रो हुनु पनि फोक्सो क्यान्सरको सम्भावित लक्षण हुन सक्छ । वास्तवमा, फोक्सोको क्यान्सरले गर्दा यदि वायुमार्ग साँघुरो भयो वा बन्द भयो भने सास फेर्न समस्या हुन्छ। यदि तपाईं सानो कार्यहरू गर्दा पनि ठुलो सास फेर्न थाल्नुहुन्छ भने यो लक्षणलाई वेवास्ता नगर्नुहोस्।
फोक्सोको क्यान्सरको कारण छाती र पछाडि दुखाइ हुन्छ । तर यो पीडा केवल खोकीको बखतमा हुने होइन, खोकी बिना पनि हुन सक्छ। यदि तपाइँ आफ्नो छाती वरिपरि दुखाई महसुस भने डाक्टरलाई बताउनुहोस्।
सास फेर्दा घरघर आवाज आउनु
जब वायुमार्गमा घाऊ आउँदछ, सास लिदा वा घरघर आवाज आउँछ । घरघर आउने समस्या एलर्जी वा दमको कारणले हो भनेर बेवास्ता नगर्नुहोस्। यो फोक्सो पनि क्यान्सरको लक्षण हुन सक्छ।
अचानक वजन घट्नु
यदि तपाईंको अचानक डाइटिंग वा व्यायाम बिना वजन कम हुन थाल्यो भने, ५–६ केजी तौल अचानक कम भयो भने तब यो संकेत हो कि ट्यूमर शरीर भित्र बढिरहेको छ। यसको कारण यो छ कि क्यान्सर कोषहरूले शरीरको सबै उर्जा आकर्षित गर्दछ, जसको कारण वजन द्रुत रूपमा कम हुन थाल्छ। यो फोक्सोको क्यान्सर मात्र होईन तर अन्य क्यान्सरहरूको पनि सामान्य लक्षण हो।